महामारीमा पाएको सहयोगको दुरुपयोग, मन्त्री र सांसदहरु प्रतिस्पर्धामा - Himali Patrika
महामारीमा पाएको सहयोगको दुरुपयोग, मन्त्री र सांसदहरु प्रतिस्पर्धामा
हिमाली पत्रिका १२ जेष्ठ २०७८, 9:58 am
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसको महामारी विरुद्ध लड्न विदेशी समुदाय, विकास साझेदार, नेपाली नियोगहरुले नेपाललाई विभिन्न प्रकारका सहयोग गरीररहेका छन। कोभिडका नाममा प्राप्त हुने राहत सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अपनाएको एकद्वार प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा कडाइ नहुँदा राहतको वितरणमा समेत समस्या र दुरुपयोग देखिएको छ। भाइरसको दोस्रो लहरबाट नराम्रोसँग प्रभावित बनेपछि नेपाललाई महामारीविरुद्ध जुध्न आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु, उपकरण तथा औषधि सहयोग भइरहेको छ।
तर, संकटमा पाएको सहयोगको दुरुपयोग बढ्न थालेको छ। पहुँचको आधारमा कुनै प्रक्रिया र मापदण्ड नबनाई मनलाग्दी वितरण गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध बढेको छ।
सोही कारण हामीले देखेका छौँ आजभोली अक्सिजनका सिलिण्डर सरकार भन्दा धेरै समाजसेवी, नेता, सांसद, मन्त्रीहरुले बाँड्ने प्रचलन बडेको छ। यसरी बाड्दा बिरामी कहाँ पुग्ला कि आफ्ना नेता कार्यकर्ता र आसेपासे कहाँ अनुमान लगाउन ग्राहो छैन। यही कारण हो, अहिले अस्पतालमा जाँदा डाक्टरले पहिले अक्सिजन छ कि छैन भनेर सोध्ने परिपाटी बनेको।
‘हामीले रुखहरुलाई अक्सिजन दिन्छौं र रुखले कार्बन्डाइडअक्साइड लिन्छ’ भन्ने वाक्यका कारण विवादमा परेका वन मन्त्री प्रेमबहादुर आले अहिले पुनः विवादमा तानिएका छन्।
उनी पछिल्लो पटक विवादमा तानिनुको कारण हो, सहयोग स्वरुप आएको चाइनिज अक्सिजन सिलिण्डरमा हैकम जमाउनु र त्यसमाथि महामारीमा लोकप्रियताको लागि प्रचार गर्नु।
देशमा अक्सिजन र स्वास्थ्य सामग्रीको हाहाकार भइरहको बेलामा मन्त्री आलेले सोमबार गृहजिल्ला डोटीमा सहयोग हस्तान्तरण गरे। उनले अक्सिजन सिलिण्डर सहितका स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरे। जसमा उनको नाम लेखिएको स्टिकर समेत टाँसिएको थियो।
यसरी स्वास्थ्य सामग्री कब्जा गरी वितरण गर्ने उनी एक्ला होइनन्। यसअघि गत वैशाख २९ गते निर्वतमान उर्जामन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले १८ थान अक्सिजन सिलिण्डर सहित स्वास्थ्य सामग्री आफ्नो गृह जिल्ला अर्घाखाँची पठाए। गत जेठ २ गते एमाले सांसद गंगा चौधरीको घरमा ६ थान अक्सिजन सिलिण्डर भेटिए।
गत बुधबार दैलखबाट सांसद बनेकी पार्वती विसुंखेले पनि गाडी भरेर स्वास्थ्य सामग्रि लिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेकि छन्। त्यस्तै एमाले सांसद शान्ता चौधरी २० ओटा अक्सिजन सिलिण्डर सहितका स्वास्थ्य सामग्री सहित गृह जिल्ला दाङ पुगिन्।
यी केही उदाहरण मात्र हुन जसले मन्त्री र सांसदहरु शक्ति र पहुँचको आधारमा आफ्ना क्षेत्र र जिल्लाामा बजेट र स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउने होडबाजी देखाइरहेका छन्। जबकि अक्सिजन सिलिण्डर र स्वास्थ्य सामग्री वितरणको जिम्मा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ।
अहिले अस्पतालमा गम्भिर प्रकृतिका विरामीहरुले अक्सिजनको अभावमा मृत्युवरण गरीरहेका छन्। महामारीमा अग्रपङ्तिमा खटिने जनशक्तिले आवश्यक मात्रामा पिपिइ लगाएतका स्वास्थ्य सामग्री पाउन नसकी जोखिम मोलेर काम गरीररहेका छन्।
तर, मन्त्री र सांसद आफैं अक्सिजन सिलिण्डर कब्जा गरेर आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याउने प्रतिस्पर्धामा छन्। यति मात्रै होइन उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा मेरो पहलमा यति भयो भनेर स्टाटस लेखेको देखिन्छ।
उनीहरुले सहयोग गर्न नपाउने होइन तर, जिम्मा पाएको निकायलाई खबरदारी गर्ने कि आफै कब्जाको शैलीमा लिएर वितरण गर्ने ? त्यसो भए मन्त्री र सांसदको पहुँच नभएका ठाउँमा कसैले सहयोग नै नगर्ने ?
यसले एकातिर पहुँच नभएका क्षेत्र र वर्गका मानिसहरुमा नैराश्यता बढेको छ भने अर्कोतिर अति जरुरी बिरामीले अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवस्था छ।
बजेट र स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक्ता र प्राथामिकताका आधारमा वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालय यो विषयमा बेखबर जस्तै छ।यसरी बजेट र स्वास्थ्य सामग्रीको वितरण मापदण्ड नबनाई किन गरिएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु कसैले सहयोग गरेको कुरा आफ्नो जानकारीमा नहुने बताउँछन।
‘स्वस्थ्य सामग्री वितरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ र गरीरहेको छ। आवश्यक्ताका आधारमा विभिन्न प्रदेश, जिल्ला र अस्पतालहरुमा त्यी सामग्रीहरु पठाउने गरीएको छ। जे उपयोगी हुन्छ त्यो सबै ठाउँमा समान रुपमा पठाइएको छ।’
कति समानहरु प्रदेश स्टोरमा पठाईएको छ, भने कति स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतको विभागबाट बाडिने गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई छ।
‘हामीले योजना बनाएका हुन्छौँ, कहाँ कहाँ के बनाउने भनेर,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘जरुरी हो कि होइन भन्ने सबै कुरा विचार गरेर पोलिसी बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राथामिकता निर्धारण गर्छ। यो काम गर्नुपर्ने र यो बनाउनु पर्ने छ भनेर हामीले मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि पठाउछौँ। त्यँहा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पुग्छ। त्यसपछि अर्थले स्वीकृति गरेपछि बल्ल बजेट निकासी हुने हो।’
‘त्यसपछि सम्बन्धित ठाउँको लागि बजेट पठाई दिन्छौँ। हाम्रो पोलिसी अनुसार नै काम भइरहेको छ। यसमा तीनवटा कुराले गाइड गरेको छ। पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजे,’ ती अधिकारीले भने।
यसरी बजेट र अनुदानमा प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीहरु प्रदेश र अस्पतालहरुलाई सिधै पठाउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
हालसम्म कुन कुन देशले गरे सहयोग
कोरोनाको दोस्रो लहरले मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी सहयता पनि बढीरहेको छ। दोस्रो लहरले भयावह रुप लिन थालेसँगै सरकारले विभिन्न निकायहरुलाई सहयोगको आह्वान गरेको थियो। सरकारको आह्वान अनुसार नेपाललाई चीन, स्पेन, स्वीजरल्याण्ड, अमेरिका, बंगलादेश लगाएतका विभिन्न देशबाहरुट स्वास्थ्य सहायता सामग्री तथा उपकरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
चीन सरकारबाट २ हजार थान अक्सिजन सिलिण्डर प्राप्त भएको र तीब्बत सरकारबाट १ सय ५० थान लिक्विीड अक्सिजन ट्यांक सहयोग प्राप्त भएकाे छ।
स्पेनबाट १५ भेन्टीलिटर, १० अक्सिजन कन्सन्टे«टर र १ लाख २४ हजार एण्टिजन किट
स्वीजरल्याण्डबाट ११ लाख एन्टीजन किट, ४० भेन्टिलेटर र १० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर
बंगलादेशबाट १० हजार भायल रेम्डेसिभिर प्राप्त भएको
सिंगापुरबाट २० भेन्टिलेटर र १ लाख २४ हजार पीसीआर किट प्राप्त भएको
अमेरीकाबाट ५ लाख एन्टीजन किट, पिपिइ लगाएतका स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको र थप आउने क्रममा रहेको
यस्तै महामारीमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट १३ करोड गरी करिब २ अर्बको स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको मन्त्रालयले बताएको छ।